Dhammaan kooxihii Ingiriiska oo ka baxay European Super League-ga - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Dhammaan kooxihii Ingiriiska oo ka baxay European Super League-ga
Dhammaan lixdii naadi ee ka socotay horyaalka Ingiriiska ee Premier Leaguege-ga ee qeybta ka ahaa tartankii dhawaan lagu dhawaaqay ee Super League ay sheegeen in ay gabi ahaanba ka baxeen tartankaasi.
Manchester City ayaa markii ugu horeeysay ku dhawaaqday inay ka baxday tartanka Super League ka dib markii ay Chelsea sheegtay inay diyaarinayso dukumiintigii ay uga bixi lahayd tartanka.
Afarta koox ee kale-Arsenal, Liverpool, Manchester United iyo Tottenham ayaa dhammaan iyagana raacay raadkii Chelsea iyo City.
Maamulka Super League ayaa sheegay inay dib u habeen ku sameyn doonaan mashruuca. Tartankan oo la sheegay inay ka qeyb galayaan 12 kooxood ayaa lagu dhawaaqay Axaddii taasi oo horseedday inay gaashaanka u daruuraan dowlado iyo taageerayaal badan.
Dowladda UK ayaa sheegtay in ay qaadi doonto tallaaba kasta oo looga hortagayo horyaalka “gooni u goosadka ah” ee European Super League.
Xoghayaha dhaqanka Ingiriiska, Oliver Dowden, ayaa sheegay inuu ku biiray dadka aadka uga caraysan qorshaha European Super League.
Horyaalkan cusub ayaa la sheegay inuu yeelan doona 20 kooxood, waxaana sanad kasta ku soo biiri doono 5 kooxood oo bedalaya kuwa ka haray. Waxa uu dhici doonaa bartamaha todobaadka oo hadda la ciyaaro Champions League-ga.
Maxay koox kasta sheegtay?
Guudiga Arsenal ayaa sheegay inaysan ugu talagelin inay horseedaan “khalkhal iyo murugu” waxay sheegeen in sababta ay ugu biireen European Super League ay ahayd inaysan doonayn in kooxaha kale aysan ka harin.
Manchester United ayaa sheegtay inay “wali ka go’an tahay inay la shaqeyso dadka kale guud ahaan bulshada kubbaada cagta si ay ula yimaadaan xal waara oo looga hortago caqabadaha mustaqbalka fog ee ciyaarta wajahaya”.
Liverpool ayaa sheegtay in kooxda ay “heshay fariimo ka kala yimid daneeyayaasha muhiimka ah ee kala duwan, gudaha iyo dibaddaba” ka hor inta aysan gaarin go’aankooda, waxayna uga mahadcelisay “fikradohooda qaali ah”.
Levy ayaa sheegay in Tottenham ay dareentay inay “muhiim tahay” ka qeyb qaadashada “qaab dhismeedka cusub ee suuragalka ah ee lagu raadinaya hubinta maaliyadeed iyo joogtaynta dhaqaalaha.”
Wuxuu intaasi raaciyay: “Waa inaan u mahadnaqnaa dhammaan taageerayaasha soo bandhigay fikradahooda .”
Chelsea ayaa sheegtay in ka dib markii ay heleen “waqti ay si buuxda uga fiirsadaan arinta” ay go’aansadeen in “ka sii qeyb ahaanshahooda qorshayaashan aysan dan u aheyn kooxda, taageerayaasha ama bulsho weynta kubada cagtaba”.
Manchester City ayaa sheegtay inay “si rasmi ah u dhaqan galisay hanaankii looga bixi lahaa horyaalka Yurub ee Super League”
Previous articleHoggaamiyeyaasha Afrika oo ka falceliyay dilkii Madaxweynihii dalka Chat
Next articleWafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo gaaray Magalada Baydhabo
Tottenham oo shaqada ka ceyrisay tababare Jose Mourinho